I-PP Tape, i-Polypropylene Webbing / ibhande, umthengisi we-PP Webbing
I-Polypropylene (PP) I-Webbing yeSikhwama / i-Waist Belt
I-PP Tape (PP Webbing) I-Parameters
I-PP tape (PP Webbing) eyenziwe yimishini ye-jacquard
I-PP tape (PP Webbing) eyenziwa yimishini yokuhamba
Izinto zokwakha: izinsimbi ezivamile, intambo ephakeme, uhlaka olungenalutho / ubala olukhanyayo, u-anti-UV uzi, umshini wokuphuza umlilo, njll.
Isicelo: ibhande lesikhumba, ibhande lesilwane, ibhande lezimpahla, ibhande lokugqoka, ibhande lokuphepha
Ububanzi: 2cm, 2.5cm, 3.2cm, 3.8cm, njll
Materials I-Polypropylene (PP)
ububanzi 1cm, 2cm, 2.5cm, 3.2cm, 3.8cm noma njengesicelo sekhasimende
Amakhono Ukunyathelisa ukushisa okushisayo; I-Woven / Jacquard
isitayela I-Herringbone, i-Plain, i-Twill, i-Tank pattern, i-Bead
emasakeni 20y / roll, 30y / roll, 50y / roll, 100y / roll
Color Eqinile, eqoshiwe, enemibala eminingi
Isici Amandla aphezulu; Ukumelana nokumelana; Okungekho-hygroscopic; Ukumelana kwama-Chemical; Ukushesha okukhanyayo
Isicelo Kufanelekile izesekeli zezambatho, izikhwama, izikhwama zempuphu, i-suitcase nezicathulo, i-band band, ibhande lesilwane, ibhande lomthwalo, ibhande lokugqoka, ithoyizi, isikhwama sokulala, imishini yokuqina, itende, imikhiqizo yempi kanye nemikhiqizo yokuphepha emsebenzini, njll.
Chofoza inkinobho elandelayo (isixhumanisi) semikhiqizo eningi
Okuningi ku-PP Tape
Ukwakhiwa kweBraid / iTape
I-Waist Tape, iTewing Waist Tape, i-Woven Waist Tape
I-Tape ebonakalayo ne-Vest Refest
Ukotini \_ Polyester \_ TC Ukubamba Ukubamba
I-Webbing for Bags & Cases
I-Polyester Mattress Tape
I-Jacquard Tape yendabuko
I-PP Tape Ikhaya Izigaba - Ukutadisha --Zizi - I-Ribbon ne-Tape - Amaphuzu - Izikhala - Izinkinobho --Ukufakazela --Tassel & Fringe / Ukunciphisa - Ukusekela Izinto Zokusebenza - Izigaba & Izesekeli --Umshini Wokuhlola & Izingxenye --Fabric - Abanye Inkampani - Ukubuka kwe-MH - UMH Industrial --- Izindwangu Zomshini --- I-Ribbon & Amathebula WeTape --- Laces Factories - Kunganjani ukhethe thina - Umlando weMH - Bonisa imibukiso --Imigomo yeGalleries - Ividiyo yevidiyo MH Isiko - Amanani Okungaphezulu - AmaphuphoMMH - Isibopho soMphakathi Xhumana nathi Indawo Yendawo Indawo engacacile --Shop Indawo --Feedback Community --Sijoyine - Izindaba